မြောက်ကိုရီးယားက အရှေ့ပင်လယ်ပြင်သို့ဦးတည်၍ ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်ဟုယူဆရသော ဒုံးကျည် ပစ်လွှတ်ခဲ့ကြောင်း ဂျပန်အစိုးရပြော - Xinhua News Agency
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံက ၂၀၂၂ ခုနှစ် မတ်လ ၂၄ ရက်တွင် တိုက်ချင်းပစ်ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည် တစ်စင်း စမ်းသပ်ပစ်လွှတ်နေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ဆိုးလ်/တိုကျို ၊ မေ ၄ ရက်(ဆင်ဟွာ)
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ(DPRK) သည် ၎င်း၏ အရှေ့ပင်လယ်ပြင်သို့ ဦးတည်၍ ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်ဟု ယူဆရသော ဒုံးကျည်တစ်စင်း ပစ်လွှတ်ခဲ့ကြောင်း ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရက ယနေ့ မေ ၄ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ပူးတွဲစစ်ဦးစီးချုပ်(JCS) ကလည်း မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံက အမျိုးအမည်မသိဒုံးကျည်တစ်စင်းပစ်လွှတ်ခဲ့ကြောင်း အစောပိုင်းတွင် ကြေညာချက် အတိုတစ်စောင်ထုတ်ပြန်အတည်ပြုခဲ့ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုမူ ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ခြင်းမရှိပေ။(Xinhua)
DPRK fires what appears to be ballistic missile toward eastern waters: Japanese gov’t
SEOUL/TOKYO, May4(Xinhua) — The Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) fired what appeared to beaballistic missile toward its eastern waters, the Japanese government said on Wednesday.
Earlier South Korea’s Joint Chiefs of Staff (JCS) confirmed that the DPRK fired an unidentified projectile inashort statement without further details. Enditem
ဂျပန်၏ စစ်အင်အား တိုးမြှင့်ခြင်းက အန္တရာယ်ရှိသော အချက်ပြမှုများ ထွက်ပေါ်လာမည်ဟု တရုတ်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ပြော
အမေရိကန်၏ တရုတ်ဆန့်ကျင်မှုများနှင့်အတူ ဂျပန်၏ ကြံစည်မှုများ
ဂျပန်တံငါသည်များ တောင်ပိုင်း Kurils ကျွန်းစု၌ ရေနေသတ္တဝါဖမ်းယူခွင့် ပရိုတိုကောကို ရုရှား ယာယီရပ်ဆိုင်း